Ity Mpanakanto ity dia Manisy sary an-kolontsaina pop ho an'ny voatavo ho an'ny Halloween | Famoronana an-tserasera
Efa akaiky ny Halloween ary noho izany, mahita fomba fiasa samy hafa amin'io antoko Anglo-Saxon io izahay, izay tsikelikely no tonga amin'ireo faritra ireo hanao azy io ho daty manokana. Ankoatra ny fitafiana amin'ny fomba miavaka amin'ny alin'ny Halloween dia misy fomba hafa hankalazana io andro manokana io.
Io no hevitry ny mpanakanto antsoina hoe Alex Wer, na dia izany aza Fantatra amin'ny anarana hoe The Pumpkin Geek ao amin'ny Instagram, ary iza no azo faritana ho toy ny mpanjaka mahay ny voatavo. Web, nandritra ny fety Halloween tamin'ny taona 2009, rehefa nanontany azy ny vadiny raha afaka manamboatra sary famantarana ny orinasany ao anaty voatavo izy dia noraisiny tamin'ny tandrok'ilay omby ary azony.
Ny nataony dia mifidy voatavo efa noforonin-tanana, raha tokony ho misy tena izy, mba hahafahany hisy foana ary ny fotoana dia tsy hanimba ny voajanahary. Ny tranonkala dia nahita fa naka baiko avy amin'ny orinasa hafa nandritra ny alina ary nanomboka nahazo komisiona ho an'ny sarin-jaza.
Ny fizotry ny asan'i Wer, izay azo antsoina hoe teknikan'ny loko efatra izy io, andramo ny sokitra amin'ny halaliny samy hafa. Ny zava-bitan'ity dia ny fahatapahana, haavo roa samy hafa ary sosona hafa ho an'ireo faritra maizina indrindra amin'ny sary, dia afaka manintona izay ao an-tsainy na ny fangatahan'ny mpanjifa.
Rehefa mirehitra tsara avy ao anatiny ny voatavo, mahazo sary feno tsipiriany ianao fa, araka ny aseho amin'ny sary nozaraina eto, dia afaka mahasarika ny sain'ny olona.
Ny tsirairay amin'ny Volavolan-tsoratry ny tanana mahavariana dia mitentina 4-6 ora ny mpanakanto, miankina amin'ny fahasarotan'ny asa hatrany. Tolo-kevitra ara-javakanto mahaliana nataon'i Alex Wer izay ho hitanao ao ny instagram ho an'ny alina Halloween; toy ity makiazy ity ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sary famantarana kolontsaina pop voasokitra anaty voatavo ho an'ny Halloween